Antananarivo, Toamasina.. 79 indray voan'ny Coronavirus
Anosiavaratra Maty teo am-piterahana ilay voan’ny covid-19
Renim-pianankaviana iray notsaboina teny amin’ny Hopitaly Anosiavaratra voamarina fa voan’ny Covid 19 no namoy ny ainy, ka nampiakatra ny isan’ny maty rehetra hatramin’izay ho fito. Nisy fahasarotany ny fiterahany ny alarobia 3 jona teo.
Alakamisy Fenoarivo Nofendrahana ranom-panafody ny sekoly sy ny tsena
Anisan’ny toerana ahitana olona maro tratry ny aretina Covid 19 any amin’ny kaominina Alakamisy Fenoarivo, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Minisitry ny fahasalamana Mangataka fanampiana amin`ny « fond mondial »
Nibahan-toerana mandritra ny tatitry ny misnitry ny fahsalamana manoloana ny solombavambahoaka ny momba ny aretina Covid-19. Nitondra fanazavana ny minisitry ny fahasalamana,Ahmad Ahmad, momba ny ezaka vita momba ny “coronavirus”.
Nosy Seychelles Sitrana avokoa ireo mararin’ny Covid 19
Raha ny tarehimarika farany nivoaka tamina haino aman-jery iraisam-pirenena iray dia firenena miisa 5 no nahitana ny taham-pahasitranan'ny covid-19 tsara indrindra eto Afrika hatreto.
Minisitry ny fahasalamana avy any Tchad “Olona 34 no notsaboinay tamin’ny CVO »
Nilaza ny Minisitry ny fahasalamana Tchadien Mahamoud Youssouf Khayal omaly zoma 4 jona tao amin’ny fampahalalam-baovao Al Wihdad Info, fa olona 34 no notsaboin’izy ireo tamin’ny Covid Organics avy aty Madagasikara.
Famindra Justin “Miantso ny vahoakan’i Toamasina hanaja ny fihibohana”
Miantso ny vahoakan` i Toamasina hanaraka ny fepetra entina hiadiana amin` ny Covid-19 ny depiote Famindra Justin, izay voafidy tao Toamasina I.
Midangana hatrany ny isa 63 indray voan’ny coronavirus
Trangana coronavirus 63 be izao no notaterin’ny Pr Vololontiana Hanta omaly, izay antontan’isa betsaka indrindra tao anatin’ny 1 andro hatramin’ny
Niakatra ho 405 ny olona voan’ny Coronavirus na Covid-19 eto Madagasikara, ka 79 ny indray voa, raha hatambatra ny valin’ny fitiliana ny talata sy ny
alarobia teo. Miisa 390 ny fitiliana natao ny talata 19 mey ka 45 ny olona voa, 42 no tany Toamasina, ary 3 teto Antananarivo. Miisa 34 kosa ny olona voamarina fa voa tao anatin’ny fitiliana natao ny 20 mey, araka ny tatitry Pr Vololontiana Hanta omaly. Fitiliana 139 nahitana tranga vaovao 27 no hitan’ny IPM ka ny 17 teto Antananarivo, ary 10 tao Moramanga. Tamin’ny fitiliana 25 tany Toamasina, dia 7 no voa, ka miisa 34 izany ny fitambaran’ny voa hitan’ny fitiliana natao ny alarobia teo. Tao anatin’ny roa andro izany, dia nahitana tranga vaovao 20 teto Antananarivo, 10 Moramanga, 49 Toamasina. Hatreto, dia 131 ny sitrana, 2 ny maty, ary 272 ny mbola manaraka fitsaboana, raha ny tatitra ofisialy. Misy olona iray ahiana ny toe-pahasalamany na ao anatin’ilay hoe “forme grave” any Toamasina. Tsy nisy kosa ny fandisoana na fanamarinana mahakasika ilay trangan-javatra tao amin’ny Hopitalibe Toamasina, nisiana lehilahy iray namoy ny ainy izay voalaza fa voan’ny “fièvre typhoide”, kanefa voalaza fa nahiana ho voan’ny covid-19, ka notiliana ary “positif” ny valiny. Teo ihany koa ilay fahafatesana raim-pianankaviana 70 taona tany Fianarantsoa, izay rain'ilay olona "cas positif" voalohany tany Fianarantsoa. Miakatra hatrany ny isa, ary hita ho tsy voafehy ity valanaretina ity. Mety mbola lavitra vao ho tonga amin’ilay tomban’ny isa ambony indrindra mety ho voa na ny “Pic épidemiologique” isika, ary ahiana tsy haharaka ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tànana ny marary. Tia mangatsiaka sy mandomando ny covid-19. Maharitra kokoa izy raha sanatria mivoaka amin’ny vatan’olombelona amin’ny alalan’ny kohaka ka mipetraka zavatra mety ho voakasiky ny olona, ka ilaina ny mitandrina mafy amin’izao vanim-potoana mangatsiaka izao, hoy ny Pr Vololontiana Hanta.